Madaxweynaha J. F. S. oo maanta Jabuuti kula kulmaya madaxweynaha maamulka Somaliland – Radio Muqdisho
Madaxweynaha J. F. S. oo maanta Jabuuti kula kulmaya madaxweynaha maamulka Somaliland
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan wadanka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa lagu wadaa inuu maanta la kulmo madaxweynaha maamulka Somaliland Amxed Maxamed Siilaanyo.
Safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Jabuuti ayaa Radio Muqdisho u xaqiijisay in xalay oo dhan ay socdeen wadahadallo u dhaxeeyay wafdiga ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xaan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in maanta uu la kulmo madaxweynaha maamulka Soomaaliland, waxaana kulankaasi goob ka noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Natiijada wadahadallada labada dhinac ayaa la filayaa in saacadaha soo socda loo soo bandhigo warbaahinta, waxaana la rajeenayaa in go’aannada ka soo baxa kulamadaasi ay noqon doonaan kuwo taariikhi ah oo waxtar u leh ummadda Soomaaliyeed.
Daawo Sawirrada:- Xafladdii xalay lagu qabtay taliska ciidanka booliiska ee Muqdisho